गरीब देश कि गरीब जनताहरुको देश? – tistung deurali
गरीब देश कि गरीब जनताहरुको देश?
Posted on June 22, 2013 February 7, 2015 by tistung
भुतपूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले twitter मा लेख्नुभएछ: “नेपालका पहिलो डलर अरबपति विनोद चौधरीको आत्मकथा रोचक छ। तर अब गरीब देशको धनी मान्छेको सट्टा धनी देेशको धनी मान्छे बन्न कोशिश गर्ने हो कि?” केहि मित्रहरुले कुरा गरेको हुँदा मैले पनि देख्न पाएँ।
नेपालका पहिलो डलर अरबपति विनोद चौधरीको आत्मकथा रोचक छ। तर अब गरीब देशको धनी मान्छेको सट्टा धनी देेशको धनी मान्छे बन्न कोशिश गर्ने हो कि?
— Baburam Bhattarai (@brb_laaldhwoj) June 22, 2013
डा बाबुराम भट्टराईले भन्न खोज्नुभएको कुरा के होला त? उहाँको tweet को आशय हेर्दा पहिलो महत्वको कुरा देश धनी हुनु हो जस्तो लाग्छ। पहिले देश धनी बन्नुपर्छ, अनि देश धनी बनिसकेपछि त्यस देशको धनी मान्छे हुनु राम्रो हो भनेजस्तो लाग्यो।
कुनै देश गरीब हुने आफ्ना जनताहरु गरीब भएर नै होइन र? धनी जनताहरु भएर पनि गरीब भएको देश कुन होला? नेपाल गरीब भएको हामी अधिकंश जनताहरु गरीब भएरै हो। हामीहरु धनी हुने हो भने देश पनि धनी बन्छ। जनताहरु गरीब नै रहिरहेर कुनै देश धनी बनेको पनि मलाई थाहा छैन। देश आफैँ धनी हुने त्यस्तो तरीका के होला त? कसैलाई थाहा छ?
Posted in economy, nepal, politicsTagged development economy Nepal policy poverty prosperity
← काठमान्डुमा भारतीय शैक्षिक मेला र नेपालको गिर्दो स्थिती
गरीबीको नाममा राजनीति कहिलेसम्म? →